Ukuloba kwehlobo kunye neHikin ...
Ekhaya Khetha Ubusika Cap kunye ...
Camo Amadoda Adjustable ...
Uhlobo oluphezulu lweMikhosi yoMkhosi ...
Amakhwenkwe aMantombazana eNtshatsheli yeBhola yeBhola
I-Kid Winter Knit Sarm Skull Beanie Cap iminqwazi yabafazi
Isixhobo: ezinithiweyo ukakayi olufudumeleyo umnqwazi yenziwe 100% ipholiyesta , which ityebile kwaye intofontofo. Ngaba kunokukwenza uzive ushushu kunye nefashoni.
UBOMI OBODWA BUFANELEKILE KAKHULU: ikhephu lekhephu kubafazi nge-elastic, ubungakanani obulodwa ngokuolula okuhle, kwisangqa sentloko: Imilinganiselo (56-58cm) eya kulungela ubukhulu beentloko zabantu.
Iinkcukacha zoyilo:Eyethu Beanie Iminqwazi ijiwe ngokuqinileyo yoyilo olukhulu lwe "Slouch", ayisindi kodwa eneneni igcina ishushu. Yeyona ndlela yokuhamba ibalaseleyo ekufanele ukuba ube nayo kwaye inokusetyenziselwa imisebenzi yangaphandle enjengokunyuka intaba okanye ukuskiya kwimidlalo yesiqhelo yemihla ngemihla njengokuthenga okanye ukubaleka.
Ukuhlamba ngokulula: ubusika obufudumeleyo bomntwana obunokuba mnandi Ukuhlanjwa ngesandla kunye nokuhlanjwa ngomatshini.
Hat yasebusika ethambileyo eshushu yeeKepusi yaMakhwenkwe aMantombazana
Ukuguquguquka: iminqwazi eshushu zi-elastic kwaye ziyolula, zilula kwaye zikhululekile, azizukubangela uxinzelelo kwintloko yomntwana wakho ngelixa zigcina zifudumele, zilungele iintsana, iintsana, abantwana kunye nabantwana, kulula ukuzidibanisa nezambatho zemihla ngemihla kwaye zinokongeza ukuqonda kunye nokuzonwabisa kwimpahla yemihla ngemihla
Ekhaya ukhetha iKhaphethi wasebusika kunye neBlim Ear flap yaMadoda
UKUSETYENZISWA NGOKUSETYENZISWA KUNYE NOTSHINTSHO-Oku ikhaya ukhetha umnqwazi wasebusika ifaka uyilo loboya obunqabileyo bokukhusela iindlebe kunye nentamo yakho kubanda nasemoyeni. Njengokuba umzimba wakho ushushu, maneka nje isiciko sendlebe ukunceda ukulawula ubushushu bomzimba wakho.
UKUTHUTHUZELWA KWE-SUPERIOR - ipholiyesta epholileyo / ikotoni yekepusi yethu ebalekayo yamadoda ikhululekile kwaye inika ukhuseleko olufanelekileyo. Ukuhlamba umatshini kubanda kumjikelo obuthathaka; umoya owomileyo.
REDUCE GLARE- le Khaphethi yasebusika ene-Brim Ear flap for Men inebala elimnyama phantsi kwetyala elinceda ukukhusela amehlo akho elangeni ngexesha lezemidlalo zasebusika. Njengokubaleka, ukuhamba intaba, kunye nokuskiya kwilizwe elisetyenziselwa imidlalo yokuwa kunye negalufa lasebusika.
Iminqwazi yangaphandle yeLanga leVisor yamadoda nabafazi
Ukuvalwa kwehuka kunye neLoop
Susa ilitha emehlweni akho: Ngaba uyagula kwaye udiniwe lilanga elingena emehlweni akho, konke kodwa kukumfanyekise okwethutyana. Yiloo nto esizele yona. Ezi zixhobo ze-unisex ze-visor caps ziya kugcina ukukhanya kwamehlo akho, kwaye zibukeka zipholile xa zisenza njalo, nazo.
Mkhulu kwimidlalo nakwimisebenzi yangaphandle ongaphandle samazibuko sun visor hats zenzelwe ukuba zingasindi, ziphefumle kwaye zikhululeke. Abayi kuze bangene endleleni yakho, ke bobona bancedisi abafanelekileyo bokuqhuba, ukubaleka, imidlalo kunye neminye imisebenzi yangaphandle.
Izinto zePrimiyamu zoMgangatho: Xa kuziwa kuthi ongaphandle samazibuko sun visor hes, Senza inqaku lokungasebenzisi nto ngaphandle komgangatho ogqwesileyo womgangatho welaphu lomqhaphu, kunye neenkqubo zemveliso zobugcisa kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo.
Ifashoni kunye nezixhobo ezinesitayile: ongaphandle samazibuko sun visor hats s zingaphezulu kakhulu kwendlela yokuzikhusela elangeni, okanye isiqwenga sezixhobo zemidlalo. Ngokwenene zizixhobo ezithandwayo zefashoni, kunye nendlela entle yokuphuma kwimidlalo yasezidolophini okanye kwisitayile esingaqhelekanga.
Ukuzifihla okuLungelelanisiweyo kwaMadoda kwiHatbackback Hat
Sifihle Snapback Hat ukuhamba, ukuhamba intaba, ukwenza igadi, ukuloba kunye neminye imisebenzi yangaphandle.
Ngamaxesha onyaka: intwasahlobo, ihlobo, ukwindla.
Ukulungelelaniswa, ubungakanani obunye buhambelana ne-unisex yabantu abadala.
Ifanelekile iminyaka emininzi.
Ubunzima bokukhanya kunye nokukhululeka, kufanelekile ngaphakathi nangaphandle.
I-UPF yangaphandle ye-50 + yokuLoba iLanga nge-Flap Flap
Lungiselela ukuzonwabisa: Ngaba ujonge ogqibeleleyo ongaphandle sun cap ukongeza ngaphezulu kwengubo yakho yokuloba, ukuzingela, okanye uhambo lwenkampu. Ewe, uyifumene nje. Okuongaphandle sun cap iyasebenza, iyaphefumla, ayisindi, kwaye iyonwaba- ngamafutshane, yonke into iminqwazi ifanele ukuba yiyo.
Imisebenzi yangaphandle: Nokuba uceba ukuloba echibini, ukuzingela ehlathini, okanye ufuna nje ukukhaba umva kwaye wonwabele ngaphandle ngaphandle ngekepusi ebandayo ngesandla, lo mnqwazi woyikekayo uya kuqinisekisa ukugcina ilanga emehlweni akho kwaye uthintele nakuphi na ukutshiswa lilanga.
Umgangatho weNkulumbuso: Xa kuziwa kuthi ikepusi yelanga yokuloba ngaphandle, Senza inqaku lokungasebenzisi nto ngaphandle kwezixhobo ezigqwesileyo, kunye neenkqubo zobugcisa zemveliso kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo.
Indlebe kunye neNtamo yokuKhusela iFlap: Kunye nobubanzi bayo, le ntloko yelanga yokuloba ngaphandle ikwaxhotyiswe ngesibambiso sokukhusela ilanga esinokugubungela umqala wentamo kunye neendlebe zakho, kwaye kuthintele ukucaphuka kunye nokutshiswa lilanga ekuhlaleni ilanga ngqo ixesha elide.
Uhlobo oluphezulu lweSitayile somkhosi woMkhosi
I-Oversized flat top style yomkhosi womkhosi kulawo madoda anobukhulu obukhulu beentloko
Isithsaba esiphezulu seFlat, isityholo esomeleleyo nesenziwe kwangaphambili, umbala ohambelana nomthetho osayilwayo
Umnqwazi womkhosi osicaba kunye nomgangatho ophezulu
Kugqityiwe nge-hook eguqukayo kunye nokuvalwa kweluphu
IZICWANGCISO ZESITAYILI: Ezi ziyathandeka kii-id boy girl baseball cap he ngowona mhle-ncinci umnqwazi wokuba umntwana wakho angazingca ngokunxiba kwaye abonise naphina apho aya khona.
UMGANGATHO WOKUQALA: Iphaneli emi-5 yomelele kwaye intofontofo kii-id boy girl baseball cap he Faka udini olugobileyo, imifanekiso enemibala yePanda ngaphakathi kwe-Sweatband kunye nokuvalwa kweVelcro ukuze kwenziwe uhlengahlengiso olulula ukuze abantwana bakho bangayikhuphi.
Iminqwazi eVulekileyo yoPhefumlo yoKhuseleko lweLanga yezeMidlalo yeTennis
Phawu: Iminqwazi evulekileyo ebhenxayo yemiphetho, ine-sun enkulu yokukhusela i-UV.
Ubukhulu: le Iminqwazi eVulekileyo yoPhefumlo yoKhuseleko lweLanga yezeMidlalo yeTennis , Ubungakanani obunye buhambelana kakhulu. Nge-Velcro ehlengahlengisiweyo yokuvala umva.
I-UPF 50+ yokuSonga yangaphandle yokuSebenza kweMinqwazi yezeMidlalo engacwangciswanga yamadoda nabafazi
Iscreen selanga: Ngaba i-50 + UPF inqanda imitha ye-UV eyingozi kwaye ikuncede ukukhusela ulusu lwakho, izinto ezizodwa ezinento yokwenza nxamnye ne-UV edlulise uvavanyo lwe-UPF 50+. eyiyo UV yokhuselo yokwenene. Idityaniswe noyilo olude kunye nolude lweVisor, iNtloko yakho, ubuso, impumlo kunye neNtloko yangaphambili ingagqunywa kakuhle. Ikhusela elangeni ukuba lingatshi ngcono. Ngokukhawuleza Uyaphefumla: Ngokusebenzisa ilaphu elikhanyayo lokufuma kunye noyilo olukhulu kunye noyilo olukhulu, lukuzisela upholile kwaye ukhululekile. Umnqwazi ungoma ngokukhawuleza okukhulu emva kokuhlamba
Oonobumba bendawo yokuHamba ngokungenwa ngumoya bangaphandle enesiciko esikhutshwayo sobuso bekhonkco lentambo
Iminqwazi ebanzi yeLanga yoMlomo oPhefumlayo waManzi oPhefumlela ukuHamba ngeKampu
Ipholiyesta yePremiyamu: Iminqwazi yelanga ebanzi ebanzi yenziwe nge-polyester yeprimiyamu, ehambelana nolusu kwaye intofontofo, kwaye ikwabonelela ngomsebenzi wokomisa ngokukhawuleza kuyo yonke imini
Ukukhuselwa lilanga: Iminqwazi yelanga ebanzi inebhilidi ende kunye nokujikeleza okungqonge intamo, ikhusela ilanga kwaye ikhusela ulusu kwizinto kunye nokonakalisa i-UVA / UVB